बाह्रबिसे का’ण्ड: खड्ग बहादुर तामाङको ह’त्या की मृ’त्यु ? श्रीमती र आफन्तका कुरा (भिडिओ) – मिलिजुली खबर
बाह्रबिसे का’ण्ड: खड्ग बहादुर तामाङको ह’त्या की मृ’त्यु ? श्रीमती र आफन्तका कुरा (भिडिओ)
इलाका प्र’हरी कार्यालय बाह्रबिसेको हिरासतमा रहेका खड्ग बहादुर तामाङको मृ त्यु नभइ हत्या रहेको श्रीमती र आफन्तले दाबी गरेका छन् । तामाङको हिरासतमै प्र हरीको कुटाईबाट मृ त्यु भएको आफन्तहरू बताएका छन् ।
बाह्रबिसे का’ण्ड: खड्ग बहादुर तामाङको ह’त्या की मृ’त्यु ? श्रीमती र आफन्तका कुरा
नगरपालिकाको वडा नम्बरमा रहेको घुम्थाङ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था चोरेको आ रोप तामाङलाई १८ गते प क्राउ गरेको थियो । प क्राउ गरेको तीनको बिचमा तामाङलाई सञ्चो नभएको भन्दै धुलिखेल अस्पताल ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृ त्यु भएको थियो ।
तामाङले साउन १७ गते राति संस्थाबाट ८१ हजार ७ सय २५ रूपैयाँ चो’री गरेको बताइएको छ । ३२ बर्षीय तामाङलाई ५८ हजार नगद सहित प्रहरीले सोधपुछका लागि पक्राउ गरेको खड्गकी श्रीमती सोम लक्ष्मी तामाङले बताउनुभयो ।
खड्गका दिदी निरमाया तामाङले प्र’हरीले कुटीकुटी मा’रेको बताउनुभयो । ‘मेरो भाईले गल्ती नै गरेन होला भन्दिन । तर प्र हरीले कुटेरै मारेको हो । नत्र शरीर भरी कसरी निलडाम हुन्छ ? का लगति मार्ने खालको मान्छे होईन मेरो भाई, निरमायाले भन्नुभयो ।’
खड्गको श’वलाई पोष्ट मार्टमका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको छ । आज धुलिखेल अस्पतालमा उपप्रमुख सुशिला पाख्रिन, आफन्त र विभिन्न राजनीतिक दल सहितको टोल घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न माग गरेको छ ।
नगरप्रमुख निमफुञ्जो शेर्पाले घ’टना लगत्तै सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई का रबाही माग गर्दै नगरपालिकाले पनि छानविन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।